October 7, 2020 - Khitalin Media
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ကြီးရေးတဲ့ “ကိုဗစ်အတွက် ကာကွယ်ဆေး အလှမ်းမဝေးတော့ပါ”
October 7, 2020 by Khitalin Media
ကာကွယ်ဆေးရခဲ့ရင်တောင် ခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးက လူအားလုံးကို ပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးလို့ပါပဲ။ သို့သော် အန္တရာယ်နဲ့အမြဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အသက်ကြီးသူတွေ နောက်ခံရောဂါရှိသူတွေ နိုင်ငံတော်ယန္တရားအတွက် မရှိမဖြစ်သူတွေကတော့ ပထမဦးစားပေး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၂၀% ကတော့ ရဖို့ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ဖြစ်ပွားမှု သေဆုံးမှု လျော့ကျမှာ အသေအချာပါပဲ ။ဆက်ပြီး အားတင်းထားကြစို့ရဲ့ ။ ကိုဗစ်ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးကို ယခု ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု WHO ၏ အကြီးအကဲ Dr. Tedros က ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမပါ ပြောကြားလိုက်သည်ဟု CGTN သတင်းဌာနက ယနေ့ (၆/၁၀/၂၀၂၀) ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ WHO အကြီးအကဲသည် နှစ်ရက်ကြာကျင်းပသည့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ထိပ်တန်းအစည်းအဝေးတွင် … Read more
၂၀၂၀ ခုနှစ် တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
တနလာင်္နေ့မွေးဖွားသူများ တနလာင်္သားသမီးတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ရတတ်သည်။ မိမိဆိုင်းငံ့ ရပ်တန့်ထားသော လုပ်ငန်းများ သက်ဝင်အောင် လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။ သို့်သော် အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများ ရရှိမည်။ အမျိူးသားကောင်းတို့သည် ဤနှစ်တွင် ကံထူးသူများဆိုလျှင် မမှားပါဘု။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လာဘ်လာဘ အခွမ်းအလမ်းများစွာ ထွက်ပေါ်လာမည်။ အလိုဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝနိုင်သည်။ အပေါင်းအသင်း ဆွေမျိုးများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များဆောင်ရွက် တတ်ရတတ်သည် အိုးအိမ် နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက် စကားပြောဆိုမှုရှိပါမည်။ အောင်မြင်မည်။ ထီးပေါက်ကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအတွက် အခွင့်အထူးခံရရှိနိုင်သော နှစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် ဝီရိယရှိမှ မိမိမျှော်မှန်းသော ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးရမည်။ မိမိအလိုဆန္ဒအတိုင်း ပညာရေး တိုးတတ်အောင်မြင် နိုင်သည်။ ထိုပြင် မိဘအုပ်ထိန်းသူများသည် အဆင့်မြင်ပညာရေး တန်းဖိုးမြင့်တတ်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်နှင့် ရင်ဆိုင် ရကိန်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ စီပွားရေး … Read more
ဆေးခန်းသွားလည်း မပျောက်တဲ့ ဒူးနာဝေဒနာများအတွက် ဆေးနည်းပေါင်းချုပ်
ငွေမကုန် လုပ်ရလွယ်ကူပြီး ဒူနာဝေဒနာများအတွက် လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းပေါင်းစုံ စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် (၁) လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာရောဂါများအတွက် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးအမှည့်ကို ဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍ သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့်လုံအောင်လိပ်ကာ ( ၅ ) နာရီခန့် ပြုတ်၍တစ်နေ့သုံးလုံးစီ ( ၅ ) ရက်ဆက်တိုက်စားပေးပါက လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရှည်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။ (ဝိစိတ္တရတနာမြေ) (၂) ငါးကြင်းခေါင်းကို မကြာခဏ ဟင်းချက်စားခြင်းဖြင့် ဒူးနာရောဂါ၊ ဒူးခေါင်းကျီးပေါင်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ရှေးကဆေးကျမ်းများတွင် ဖတ်ရှုရ၍ လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရာ ဒူးထဲမှ ကုန်ခမ်းနေသော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများ အားပြန်လည်ပြည့်ဝလာ၍ တကယ်ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ (တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးကြည်မြင့်လွင်) (၃) ဆေးရုံ ၃လလောက်တက်ခဲ့ရတဲ့ အသိတစ်ယောက် ဒီနည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်။ ၃ ပတ်လောက် … Read more
အပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းခလေးငယ်လေးများကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်…
အပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းခလေးငယ်လေးများကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်… အပျိုဖော်ဝင်စ လှသွေးကြွ အပျိုဖော်ဝင်စငယ်သွေးကြွလှပ ဆိုသောစကားသည် မိန်းခလေးတယောက်အပျိုစဖြစ်စတွင်လှပမူကိုတင်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းခလေးငယ်တစ်ယောက်အပျိုစဖြစ်စသော ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမူကို သိထားသင့်သောအချက်များကို OnDoctor တွင် အမေးများလေ့ရှိပါတယ်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းမိမိသမီးငယ်ကို ပြောင်းလဲလာသောလူနေမူပတ်ဝန်းကျင်စိတ်မချမူကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်သည့်အချက်များကို စောစီးစွာသတိထားသိချင်သောဆန္ဒကြောင့်မေးကြပါတယ်။ (1)အပျိုစဖြစ်သောအသက်အရွယ် မိန်းခလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက် ၈နှစ်မှ ၁၃နှစ်ကြားအပျိုစဖြစ်ပါတယ်။ အဝလွန်သောမိန်းခလေးများ အပျိုစဖြစ်သောအသက်အရွယ်စောလေ့ရှိပြီး ပိန်သောမိန်းခလေးများသည် နောက်ကျလေ့ရှိပါတယ်။ အသက်၁၂နှစ်အရွယ်တွင် ရင်သားဖွံ့ဖြိုးမူမရှိဘဲ အသက်၁၅နှစ်ထိရာသီလာရန်နောက်ကျသည့်အခါ ဆရာဝန်နှင့်သေချာစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ (2)ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ အပျိုစဖြစ်ချိန်အတွင်းကိုယ်ခန္ဓာမှ ထွက်သောဟော်မုန်းကြောင့် သားဥအိမ်မှ အမျိုးသမီးဟောမုန်းအီစတိုဂျင်ထွက်ပါတယ်။ အဆိုပါဟော်မုန်းကြောင့် တဖြေးဖြေးအပျိုအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဟော်မုန်းအတက်အကျပေါ်မူတည်ရ်ျလည်း အပျိုစဖြစ်စစိတ်အခြေအနေသည်လည်း အပြောင်းအလဲမြန်တတ်ပါတယ်။ (3)ဖွံ့ဖြိုးမူနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း မိန်းခလေးအများစုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးသည် တရှိန်ထိုးတိုးတက်ပြီး အစောပိုင်းတွင် ယောကျာင်္းလေးများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် မိန်းခလေးများသည်ယောကျာင်္းလေးများထက်အရပ်ပိုရှည်ပါတယ်။ မိန်းခလေးရဲ့ဖွံဖြိုးမူသည် သိသာစွာပြောင်းလဲလာသည်မှာ အဆီများ ၈%မှ ၂၁%ထိတိုးလာသောကြောင့်ပါ။ အဆိုပါအဆီများသည် မျိုးပွားမူအတွက်နှင့် … Read more
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ၃၄
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ် အတွင်း၌ တနင်္ဂနွေ သက်ရောက် ဖြစ်၏။သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း၊ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းလုပ်ရတက်၏၊ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း(သို့) လက်ရှိ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတက်၏။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျ တက်သော ကာလဖြစ်၏။သင့်အနေနဲ့ စီးပွားအလွန်တက်နေပြီ၊ ချမ်းသာနေပြီဟု ဆွေမျိုးသားချင်အပေါင်းအသင်းတို့က အထင်ကြီးနေလိမ့်မည်။ သူခိုး မျက်စိအကျခံရသောကာလဖြစ်၍ … Read more
မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ single mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ) 2.2.2010မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ် 24.1.2019မှာကွာရှင်းခဲ့ပီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ) 9နှစ်ပြည့်ဖို့၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲမှတ်ထားမယ်မထင်…….. နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်. တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်.ခေတ်ရှေ့ပြေးပီးဖလန်းဖလန်းနေခဲ့တဲ့ကျမ တပ်ထဲမှာ အဘွားအိုလေးလိုနေခဲ့ရတယ်.အဆင်ပြေပါတယ် သူငွေသုံးကြမ်းတာလေးကလွှဲရင်ပေါ့.တဖြေးဖြေးသူ့အချိုးတွေပြောင်းလာခဲ့တယ်. ကျမကိုအရင်လိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး. အိမ်လဲမကပ်တော့ဘူး ကျမအိပ်မှပြန်လာတတ်တယ်. တာဝန်ကျတဲ့နေရာက သူပုန်တပ်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဖာပွန်မှာပါ ခေါင်ပါတယ် အစားအစာလဲရှားတယ် မီးလဲအချိန်နဲ့ပါ့ ဖုန်းလဲမမိပါဘူး လိုင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တုန်းကပေါ့.ကျမနေရတဲ့အိမ်က တောင်ကုန်းပေါ်မှာအိမ်လုံးချင်းလေးတွေ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကပ်မနေဘူး.တစ်နေ့နေ့သူပြန်အလာကို အိမ်အကျယ်ကြီးထဲမှာ သရဲအရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ကျမ ကလေးလေးကိုဖက်ပီး စာင့်နေခဲ့တယ်. သူပြန်မလာတဲ့ညတွေဆို ဘယ်လောက်ခြောက်ခြားခဲ့ရလဲကို့ဘာသာကိုအသိဆုံး. ဘတ်ထရီမီးကလဲတဖြေးဖြေးမှိန်မှိန်လာတယ် အပျင်းပြေစရာ သမီးလေးမျက်နှာပဲထိုင်ကြည့်ပီးမိုးလင်းခဲ့ရတယ်.အိမ်မှာအမေက ဘာမှမခိုင်းဘဲ ဘောကြော့နေလာတဲ့ကျမ ခုတော့ဟင်းချက်လဲကျမ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလဲကျမ အဝတ်လျှော်လဲကျမကလေးထိန်းလဲကျမ ကို့ကိုယ်ကိုတောင် အဲ့လောက်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်မထင်ထားဘူး အိမ်အကူလဲခေါ်လို့မရ ရဲမေဆိုတာလဲ အမြလာမပေးနိူင်ဘူးလေအရေးထဲက တပ်ကိစ္စကပေါ်လာလို့ပြေးရပီဆို သမီးလေးကို အိမ်မှာဘယ်လိုမှစိတ်မချဘူးသူများနဲ့ထားခဲ့ရတာ အဖေနဲ့ထားခဲ့ရင်ပိုဆိုးတပ်အလုပ်တွေဆိုလဲမလစ်ဟင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ် တပ်မှာလဲနာမည်ဆိုးမရှိအောင်သူ့အတွက်နခဲ့တယ်. အိမ်အလုပ်ရောတပ်အလုပ်ရော … Read more